Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 07/11 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. . Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 29/08 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP. @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 08/08 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP (Centre Universitaire Protestante). @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Salama e, Fampatsiahivana vetivety. Araka ny efa voalaza t@ filazam-baovao t@ alahady lasa teo dia atao anaty barkety ny sakafo ho zaraina ny alahady ho avy izao. Vary sy laoka ravitoto+henakisoa no tapaka ho atao ka ny vary dia ny fiangonana no hiantoka azy fa ny laoka kosa dia iangaviana samy mba hitondra isika tsirairay eto an-toerana. Asiana mihoatra kely mba hisy hozaraina amin’ireo vahiny izay ho tonga avy any Toulouse. Misaotra mialoha antsika rehetra ary Jesosy hitahy.
Isan-droa volan’ny fitandremana Montpellier
Miarahaba antsika rehetra. - Alahady fivoriana isan-droavolan’ny Fitandremana Montpellier ny Alahady 01/08 ho avy izao koa araka ny programa efa nampitaina dia eny @ Salle Tourrière Saint Jean de Vedas no hanatanterahana ny fotoam-pivavahana ary hanomboka @ 10 ora sy sasany. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 11/07 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP. @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 04/07 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP (Centre Universitaire Protestante). @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.
Arendrina 26 jona 2021
Faneva : " Fa famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa- drà". Hosea6.6a FIVORIANA ISAN-TELOVOLANA FILEOVANA MARSEILLE Asabotsy 19 sy Alahady 20 Jona 2021 Toerana: FLM Montpellier 14 rue des escholiers Saint Jean de védas 34430 - Salle Tourrière Alahady 20 Jona 2021 (III aorian’ny Trinite) (Fotoampivavahana Litorjika "Présentiel") 9ora sy 30mn : Sekoly Alahady Mpitarika : Rtoa Lanto Ralaitsizafy. Fanombohana fotoam-pivavahana 10ora 30mn Alitara sy Torinteny : Pastora Flavien Volatombo Mpitarika : Katekista Velosaotsy Vakiteny TT : Mika 7.18-20. Rtoa Rado Landy Epistily : 1 Petera5.6-11. Katekista Tahiry Ratsiambahotra Filazantsara : Lioka 15.1-10. Atoa Hendry Rabarisoa Toriteny : Matio 9.9-13 Filazandraharaha -Fandraisam-pitenenana -Rakitra (indroa mihodina: 1.Rakitra 2.Valopin’ny Fivoriana) Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo. Famaranana : Katekista François D'Assise Rakotoarimanana Ho Voninahitr' Andriamanitra irery ihany !
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika, " Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena Masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny Tenenany, mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." I Petera 2, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina hiantsoana antsika lehilahin'ny Fiangonana rehetra, hiara-hivory ny alahady aorian'ny culte ho avy izao, hiarahantsika handinika ny hananganana ny fikambanan-dehilahy (FDL) eto amin'ny Fiangonana Montpellier misy antsika. Manantena antsika rehetra tompoko no efa mitaona antsika ihany koa amin'ny fitondrana ambavaka izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany Tahin'i Jesosy
Miarahaba antsika rehetra. Araka ny programme izay efa nampitaina etsy ambony dia fotoana isan-droavolana Fitandremana Montpellier ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Koa mba ho fampatsiahivana ihany dia : - Manomboka amin’ny 5 ora tolakandro ny fotoana izay atao en ligne. Ho ampitaina amintsika eto ihany ny lien hidirana ao. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 18/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 10:30 ora. Hisy ny vokatra ho tanterahana hanatevenana ny kitapom-bolan’ny fitandremana ka iangaviana isika mba samy hiomana amin’izany (fitondrana vokatra sy famadihana azy ho vola) Ny Tompo anie hitahy antsika.
Isan-droavolana 17/04/2021 Toulouse
FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (FLM) SYNODAM-PARITANY F.L.M.E FILEOVANA MARSEILLE FITANDREMANA MONTPELLIER FANEVA : Ezekiela 34, 11 "Indro, Izaho, eny Izaho no hiahy ny ondriko sy handinidinika azy." FIVORIANA ISAN-DROAVOLANA FITANDREMANA FLME MONTPELLIER Sabotsy 17 aprily 2021 sy Alahady 18 aprily 2021 Toerana : FLME Toulouse 62 Route de Blagnac 31200 Toulouse Sabotsy 17 aprily 2021 : Fanombohana : 17 ora Tapany I : fampianarana Tapany II : asa sy fampaherezana Tapany III : antsam-panahy Alahady 18 aprily 2021 : Fanombohana : 10 ora sy sasany Misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 11/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Paska 04/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Salle Tourière Saint Jean de Vedas. Fidirana amin’ny 10:30. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana ny sekoly alahady fa mba miangavy ny mpianatra ho tonga 15 min alohan'ny fidirana hamerina hira hatao mandritry ny culte - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 21/02 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin'ny 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin'ny 10 ora - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin'ny 20h tanterahana ao @ Skype « FLMMontpellier » izay anasana ny fiangonana rehetra. Ny Tompo anie hitahy antsika